Ciidanka Itoobiya oo ka baxay degmada Halgan iyo Al-Shabaab oo la wareegtay Iyo Siday Wax uga dhaceen (Dhegayso) - Hablaha Media Network
Ciidanka Itoobiya oo ka baxay degmada Halgan iyo Al-Shabaab oo la wareegtay Iyo Siday Wax uga dhaceen (Dhegayso)
HMN:- Ciidamada Itoobiyaanka ee ku socdey magaca AMISOM ayaa muddooyinkii danbe banaynaayey saldhigyo ay kulahaayeen gobolada Hiiraan, Galguduud iyo Bakool.
Saldhiga u danbeeyey ee ciidamada Itoobiyaanku kabaxaan ayaa noqdey Deegaanka Halgan, waxaana subaxnimadi hore ee maanta ay u baxeen dhanka beledweyne sida ay sheegeen dadka ku dhaqan Halgan.
Saldhiga Halgan ayaa ahayd halkii al-Shabaab ay xagaagii sanadkan 2016 weerarka ku qaadeen kaas oo ay aad ugu jabeen, Sanadkii 2014 ayey ahayd markii al-shabaab laga qabsadey Halgan.
HALKAN KA DHEGAYSO WARBIXIN BBC IYO SIDA WAX U DHACEEN
Dadka deegaanka Halgan ayaa sheegaya in al-Shabaab ay isla saakey gaareen degmada Halgan oo ka tirsan Hiiraan.
Halgan waa magaalo istiraatiiji ah, waxa ay isku xirtaa magaalooyinka Beledweyne iyo Buuloburde, waxayna saarantahay wadada laamiga ah ee isku xirta gobolada Koonfureed iyo kuwa waqooyi ee wadanka.
Dalka Itoobiya waxaa ka taagan kacdoon ay wadaan qawmiyadaha Oromada iyo Amxaarada oo ah kuwa ugu badan dalkaas, dalka waxaa lagu so rogay xaalad deg-deg ah, waxaana xabsiga la dhigey tan iyo markii xukunkaas la soo rogay dad ka badan 2000 oo qof.